यी यी व्यक्तिले नपाउने भए कोरोना बीमा – Himal eNews
यी यी व्यक्तिले नपाउने भए कोरोना बीमा
काठमाडौं । कोभिड–१९ बीमालेख ९कोरोना बीमा० मा हालसम्म ६० हजार ५८७ जनाले दाबी भुक्तानी पाएका छन् । कोरोना बीमामा हालसम्म ९१ हजार ६७३ जनाले दाबीका लागि आवेदन दिएका छन् ।बीमा समितिका अनुसार चैत ३० गतेसम्ममा रू। ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख बराबरको दाबी भुक्तानी भएको छ । गत कात्तिकसम्म दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो । तर, पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी नियमित रूपमा भइरहेको छ ।आवेदन गरेकामध्ये ६६६ जनाले भने दाबी रकम नपाउने भएका छन् । प्रतीक्षा अवधिमा कोरोना संक्रमित भएका, नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बुझाएका तथा दोहोरो आवेदन दिएकाहरूले दाबी रकम नपाउने भएका हुन् ।
पछिल्लो पटक मन्त्रालयमा पीसीआर प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ३७ हजार ३८६ आवेदन पठाइएको थियो । त्यसमा १८ हजार ५२७ आवेदन स्वीकृति भएर आइसकेको छ भने १८ हजार ८५९ ओटा आवेदन पीसीआर रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ । बाँकी आवेदनको पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘पहिला कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । तर, अहिले नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दाबी पाउन योग्य सबैले भुक्तानी पाउनेछन् ।’कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डअनुसार रू। ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारको कोषबाट हुन्छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीले यसअघि नै सो सीमा पार गरिसकेको छ । तर, दाबी भुक्तानी भने बीमा कम्पनीहरूले आफ्नै कोषबाट गर्दै आएका छन् ।
सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु, तीन घाइते
मेलम्चीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै आयोजनाले स्थानीयलाई भन्यो ‘मुहानभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नजानू’
लकडाउन : गाउँमा दूध फालाफाल, बजारमा हाहाकार !
बागलुङमा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी १६ शय्याको आइसोलेसन वार्ड तयार
नासाका दुई अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा सकुशल फर्किए, समुन्द्रमा यसरी भयो अवतरण!
आलु उत्पादन बढेपछि हौसिए महिला